'तिमीमै रहुँ' मा नयन सिं र अनु प्रधानको अभिनय - नेपालबहस
‘तिमीमै रहुँ’ मा नयन सिं र अनु प्रधानको अभिनय
| १०:५१:४३ मा प्रकाशित
२३ भदौ, काठमाडौं । पछिल्लो समयमा लकडाउनको कारण सबै क्षेत्र सुन्य भएझैं मनोरञ्जन क्षेत्र झनै ठप्प छ । लकडाउनपछि निशेधाज्ञा भन्दा अगाडी केही कलाकर्मीहरुले थोरै म्युजिक भिडियोहरु निर्माण र अभिनय गर्न भ्याए । यस्तै भाग्यमानी कलाकारको सुचीमा परेका छन् मोडल नयन सिं पनि । उनले त्यही समयमा अनु प्रधानसँग अभिनय गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
‘तिमीमै रहुँ’ बोलको गीतमा सुनिल शाहको शब्द तथा दिपेन्द्र शाहको संगीत रहेको छ भने बिशाल निरौला र अस्मिता अधिकारीको स्वर रहेको छ । विभिन्न मनोरम दृष्यहरु समावेश गरी छायाँकन गरिएको भिडियोमा नरेश ऐरको छायाँकन, विक्रम चौहानको निर्देशन तथा मिलन विश्वकर्माको सम्पादन रहेको छ ।
के तपाईलाई थाहा छ ? पुरुषहरु किन पातली केटी बढी मन पराउँछन् ? २ दिन पहिले
‘गोल्ड प्रिन्सेस अफ द वल्ड २०२०’ को उपाधी नेपालकी प्रिन्शालाई ३ हप्ता पहिले
गायिका जुना श्रीषको “गोधुली साझैंमा” ३ हप्ता पहिले
अब गुगल बैठक एक घण्टा मात्रै निःशुल्क प्रयोग गर्न पाइने ६ मिनेट पहिले
डोनाल्ड ट्रम्पमाथि १० वर्षकाे कर नतिरेको आरोप १४ मिनेट पहिले
सहकारीको करोडौं ठगीका दोषी अग्रवाल नक्कली नम्बर प्लेटका गाडीसहित पक्राउ ३४ मिनेट पहिले
ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश ४६ मिनेट पहिले
झापामा संक्रमणबाट एक सुनचाँदी व्यवसायीको मृत्यु ५१ मिनेट पहिले
काठमाडौंकाे करुणा अस्पतालमा पर्साका स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु ५३ मिनेट पहिले